June 21, 2021 - Channel Lover
အဆိုတော်မာရဇ္ဇ ကွယ်လွန်သည် ဆိုသည့်သတင်း
June 21, 2021 by Channel Lover
အဆိုတော်မာရဇ္ဇ ကွယ်လွန်သည် ဆိုသည့်သတင်း အဆိုတော်မာရဇ္ဇ မကွယ်လွန်ပါ Facebook လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ကျော်မြင့်(ခ)မာရဇ္ဇ ညနေလေးနာရီကွယ်လွန်သွားပြီလို့သတင်းတက်နေတဲ့အတွက် မာရဇ္ဇကိုဖုန်းဆက်ကြည့်တဲ့အခါဖုန်းမကိုင်ပါဘူး ခနနေတော့မာရဇ္ဇကနေဖုန်းပြန်ဆက်သွယ်လာပါတယ်” သူဘာမှမဖြစ်ဘူး နေကောင်းကြောင်း တချိန်လုံးဒီသတင်းတွေကိုပြန်ဖြေပေးနေရကြောင်း ရန်ကုန် ကန်တော်လေး ၉၁ လမ်းအိမ်မှာကျန်းမာစွာရှိကြောင်းသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ် unicode အဆိုတျောမာရဇ်ဇ ကှယျလှနျသညျ ဆိုသညျ့သတငျး အဆိုတျောမာရဇ်ဇ မကှယျလှနျပါ Facebook လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ ကြျောမွငျ့(ခ)မာရဇ်ဇ ညနလေေးနာရီကှယျလှနျသှားပွီလို့သတငျးတကျနတေဲ့အတှကျ မာရဇ်ဇကိုဖုနျးဆကျကွညျ့တဲ့အခါဖုနျးမကိုငျပါဘူး ခနနတေော့မာရဇ်ဇကနဖေုနျးပွနျဆကျသှယျလာပါတယျ” သူဘာမှမဖွဈဘူး နကေောငျးကွောငျး တခြိနျလုံးဒီသတငျးတှကေိုပွနျဖွပေေးနရေကွောငျး ရနျကုနျ ကနျတျောလေး ၉၁ လမျးအိမျမှာကနျြးမာစှာရှိကွောငျးသတငျးစကားပါခဲ့ပါတယျ
ကင်းမရွာကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ဖြူဖြူထွေး ဖေ့ဘုတ်ဆယ်လီတစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲဝင်ရောက်လာခဲ့ တဲ့ဖြူဖြူထွေးကတော့ပရိသတ်တွေ ရီမောပျော်ရွှင်စေဖို့ ဟာသဗီဒီယိုတွေရိုတ်ကူးခဲ့ပြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင်ဖြူဖြူထွေးက ပရဟိတစိတ်ပြင်းထန်ပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းမှုတွေတောက်လျော က်ပြုလုပ်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက မီးရှို့ဖျက်စီးမှုခံရတာကြောင့် တစ်ရွာလုံးမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတဲ့ ကင်းမရွာကတော့ လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာ အကူအညီတွေတော်တော်များများလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် ။ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့် ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ စေတနာရှင်တွေက အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေကြပြီး ဆယ်လီဖြူဖြူထွေးကလည်း သူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေနဲ့အတူကင်းမရွာကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေ တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေ ဖြူဖြူထွေးက အပေါ်ယံသာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှူ ခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ အချိန်တော်ကြာပျောက်နေပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အလှုတွေပြုလုပ်ပြီးပြန်ပေါ်လာခဲ့တာဘဲဖစ်ပါတယ်။ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးကို သွားရောက်လှူဒါန်း တဲ့ဖြူဖြူထွေးရဲ့ အလှူလေးကို သာဓုခေါ်ပေးပါဦး။ unicode ကငျးမရှာကိုကိုယျတိုငျသှားရောကျခဲ့ပွီးလိုအပျတဲ့ပစ်စညျးတှလှေူဒါနျးခဲ့တဲ့ဖွူဖွူထှေး ဖဘေု့တျဆယျလီတဈယောကျအနနေဲ့ အနုပညာလောကထဲဝငျရောကျလာခဲ့ တဲ့ဖွူဖွူထှေးကတော့ပရိသတျတှေ ရီမောပြျောရှငျစဖေို့ ဟာသဗီဒီယိုတှရေိုတျကူးခဲ့ပွီးအောငျမွငျခဲ့တဲ့ သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ဒါအပွငျဖွူဖွူထှေးက ပရဟိတစိတျပွငျးထနျပွီး လိုအပျတဲ့နရောတှကေိုတတျနိုငျသလောကျ … Read more
အိမ်တစ်အိမ်မှာ အမြဲလာဘ်ပွင့် အိမ်အေးချမ်းနေအောင် ဒါတွေ လုပ်ပါ 1 ၊ ဘုရားပန်း နှင့် သောက်တော်ရေ ဆွမ်း ဆီမီး အမြဲကပ်ပါ။ ဘုရားပန်း မနွမ်းပါစေနဲ့ ဘုရားပန်းအိုးထဲမှ ရေများ မပူပါစေနဲ့။ သောက်တော်ရေကို သတိရတိုင်းကပ်ပါ2၊ ဘုရားရှိခိုးလျင် အိမ်စောင့်နတ် ခြံစောင့်နတ် အိမ်ဝန်းအတွင်း မှီတင်းစောင့်ရှောက်နေထိုင်ကြသော နတ်မြတ်နတ်ကောင်းများ မြင်အပ် မမြင်အပ် သတ္တဝါများ အားလုံးကို မေတ္တာပို့ အမျှဝေပါ3၊ အလွန် ကံညံ့လာဘ်ပိတ်နေလျင် ညသန်းခေါင် ပရိတ်ရွတ်ပါ ည 12နာရီနောက်ပိုင်းသည် နတ်မြတ်နတ်ကောင်းများ လူ့ပြည်သို့လှည့်လည် ကြည့်ရှုချိန်ဖြစ်၍ ညဘက် ပရိတ်ရွတ်ဖတ် ဆုတောင်းလျင် ပို၍ ဆုတောင်းပြည့်စေပါတယ်4၊ အိမ်မှာ အဟောင်းအစုတ်တွေ … Read more
နားခိုရာအိမ်လေး မီးထဲပါသွားလို့ သေသွားတာကမှကောင်းသေးတယ်ဆိုပြီး ကင်းမရွာက အမျိုးသမီးရဲ့ငိုကြွေးမှု(ရုပ်သံ)
နားခိုရာအိမ်လေး မီးထဲပါသွားလို့ သေသွားတာကမှကောင်းသေးတယ်ဆိုပြီး ကင်းမရွာက အမျိုးသမီးရဲ့ငိုကြွေးမှု(ရုပ်သံ) ရှိစုမဲ့စုအိမ်လေးက မီးထဲပါသွားပြီး ပြာပုံဖြစ်သွားတာကြောင့် သေသွားတာမှကောင်းသေးတယ်ဆိုပြီး ငိုကြွေးနေတဲ့ ကင်းမရွာက ပြည်သူတစ်ဦးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပေါက်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းက ကင်းမရွာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့မှာ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ရွာလုံးနီးပါး မီးလောင်တိုက်သွင်းခံရတာကြောင့် ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုဆိုရင် ရွာသူရွာသားတွေခမျာ သူတို့ရဲ့အိမ်လေးတွေ မီးထဲပါသွားတာကြောင့် အရမ်းဒုက္ခရောက်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကင်းမရွာမှာနေထိုင်တဲ့ ပြည်သူအများစုကတော့ လယ်လုပ်ငန်း၊ တောင်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေဖြစ်ကြပြီး သာမန်လက်လုပ်လက်စားပြည်သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အခုလည်း ကင်းမရွာက ပြည်သူတစ်ဦးက သူမတို့အိမ်လေး မီးထဲပါသွားတဲ့အတွက် ရင်ကွဲမတက် ခံစားနေရတာ ဖြစ်ပါတယ် သူမကတော့ လက်လုပ်လက်စားပြည်သူတစ်ယောက်သာဖြစ်ပြီး ခင်ပွန်းသည်နဲ့အတူ ရိုးရိုးသားသား လုပ်ကိုင်စားသောက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတော့ … Read more
မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်မှာ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေ
June 22, 2021 June 21, 2021 by Channel Lover
မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်မှာ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေ မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၅၄ လမ်း၊ ၁၁၁ လမ်း နဲ့ ၁၁၂ လမ်းဘက်မှာ ဇွန်လ ၂၂ ရက် မနက် ၈ နာရီလောက်က စပြီး ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ ကနဦး သိရပါတယ်။ ပစ်ခတ်မှု စတင်တုန်းက အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေ အရပ်ဝတ်တွေနဲ့ ရောက်လာပြီး တရစပ် ပစ်ခတ်တာတွေ လုပ်ကြတယ်လို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်သူ တချို့က ပြောပါတယ်။ “ပစ်ခတ်တာတွေကတော့ ဆက်တိုက်ပဲ ။ အပြန်အလှန်ပစ်တဲ့ ပုံပဲ။ ဗုံးပေါက်တာတွေလည်း ကြားရတယ်။ ဘယ်ကနေ စဖြစ်တာလဲ မသိရသေးဘူး။ PDF နဲ့ ပစ်တာလို့လည်း ပြောနေကြတယ်။ အစက အရပ်ဝတ်တွေနဲ့တင် လာကြတာ မကြာဘူး။ စစ်ကားသုံးလေးစီးလည်း ရောက်လာတယ်။” … Read more
ဂျပန်အဆိုတော် Suwa Junko ပြန်လည် သီဆိုထားတဲ့ “ခွန်အားဖြည့်မိငယ်” (ရုပ်/သံ)
ဂျပန်အဆိုတော် Suwa Junko ပြန်လည် သီဆိုထားတဲ့ “ခွန်အားဖြည့်မိငယ်” (ရုပ်/သံ) ယနေ့၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အသက် ၇၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ ဂျပန်နိုင်ငံက နာမည်ကြီး အဆိုတော် Suwa Junko က အဆိုတော် ခင်မောင်တိုးရဲ့ “ခွန်အားဖြည့်မိငယ်”ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ပြန်လည် သီဆိုကာ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အားပေးခဲ့ပါတယ်။ “ဒီအချိန်မှာ ကျမ လုပ်နိုင်တဲ့အရာကို စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ ကျမတို့ ဂျပန်လူမျိုးတွေကို မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေကို နားလည်စေဖို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းပဲလို့ ယူဆမိပါတယ်” “အခုအကြိမ်ကတော့ ကျမ နေထိုင်တဲ့ တိုချိဂိခရိုင်၊ အိုတာဝါရမြို့က မြို့သူမြို့သားတွေဆီကို မြန်မာပြည်အကြောင်း ရှင်းပြပြီး သူတို့ရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ … Read more
(၃)ရက်အတွင်း မိုးကြီးနိုင်သဖြင့် ခရီးသွားလာခြင်းမပြုလုပ်သင့်သောဒေသများနှင့် မိုးလေ၀သ သတိပေးချက်
(၃)ရက်အတွင်း မိုးကြီးနိုင်သဖြင့် ခရီးသွားလာခြင်းမပြုလုပ်သင့်သောဒေသများနှင့် မိုးလေ၀သ သတိပေးချက် ၃ရက်အတွင်းမိုးကြီးနိုင်သဖြင့် ရေကြောင်း လေကြောင်း ကုန်းကြောင်း ခရီးသွားလာခြင်း မလုပ်ရန် သတိပေးချက်… ငပလီ သံတွဲ တောင်ကုတ် ၃ရက်အတွင်းမိုးကြီးနိုင်သဖြင့် ရေကြောင်း လေကြောင်း ကုန်းကြောင်း ခရီးသွားလာခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး…. 21/06/2021 နေ့ produce heavy rainfall across the area. နောက် ၂၄နာရီအတွင်း ဂွ ကျိန္တလိ ငပလီ သံတွဲ တောင်ကုတ် ဥသျှစ်ပင် ပန်းတောင်း မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်…. su su san (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေ။ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့် ရှိနေပါသည်။ ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် … Read more